Tratry ny taona vaovao ... Angamba | Martech Zone
Alahady, Desambra 31, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Anio tolakandro aho dia manantena ny handany ny alin'ny Taom-baovao miaraka amin'ny namana be dia be, Bill sy Carla. Handeha hilalao sasany isika Cranium lalao, mijery horonan-tsary vitsivitsy, ary miala sasatra eo am-piandrasana ny taona 2007 hiditra mangina ary (antenaina) am-pilaminana.
UPDATE: Nanoratra momba ny fifandraisana ara-barotra sarotra iray izay nosoratako niaraka tamin'ny bilaogera hafa aho. Noho ny fangatahan'ny mpamaky sasany dia tazomiko ity lahatsoratra ampahany ity. Soa ihany fa eo am-pandaminana ireo olana miavaka izahay.
Tari-dalan'ny mpanafika amin'ny tsindrona SQL sy ny script amin'ny cross-site
2 Jan 2007 amin'ny 9:03 PM
Jan 4, 2007 ao amin'ny 7: 51 AM
Faly aho fa voalamina io. Nahita ny lahatsoratra voalohany aho, ary tena niahiahy anao. Hatramin'ny nisaonako ny fahafatesan'ny vadiko vao tsy ela akory izay (nisaraka izahay fa mpinamana akaiky indrindra) dia azo antoka fa mifandray amin'ny Holiday Blues aho.
Ny ahy manana fanamarihana mahafaly ihany koa. Tiany ny Krismasy, saingy ny fahasalamany no nanakana azy tsy “hanao azy tsara” tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Mahafaly ahy ny mahafantatra fa nanana ny Krismasy tsara indrindra izy.